Sidee si wacan uga soocaa Amazon oo u noqotaa iibiye guuleysta?
Aan la kulanno - haddaad rabto inaad fahamto sida aad uga fiican tahay Amazon sida iibiye runtii guuleystey, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato bayaankan soo socda si loo bixiyo. Waxaan loola jeedaa in xubno badan oo ka mid ah ganacsatada iyo SEO-ka (iyo xataa kuwa iibiya waqti-weyne) ay inta badan iska indho-tiraan fursad ballaaran - adoo xoogga saaraya kaliya mashiinka raadinta Google. Dabcan, waa sheyga raadinta adduunka. Laakiin wax walbaa waa in haddii aad ku iibinaysid Amazon, meeshan internetka ee aadka u degan waa inay ahaataa mid aad uga muhiimsan adiga, halkii aad ka - computer rental in san francisco. Waa maxay sababta? Sababtoo ah marka ay timaaddo si aad u raadiso badeecada iibka, Amazon waxeey haysaa wax ku saabsan seddex jeer oo dheeraad ah miisaanka raadinta. Waa wax aan fiicneyn, sax? Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan la wadaagno qayb ka mid ah aqoonta dhabta ah ee aad u leedahay si aad u ogaatid sida ugu wanaagsan ee aad uga ambaarto Amazon si ugu dambeyntii noqoto ganacsade tafaariiqeed oo dhab ah oo iibiya halkaas.
Sidee loola socdaa Amazon
Ugu horreyntii, aynu eegno farqiga u dhexeeya rikoodhka makiinadaha waaweyn ee raadinta (sida Google laftiisa), iyo sida loola macaamilo Amazon - loona qaaday miisaanka.
Beddelidda iyo Isticmaalayaasha Qalabka
Ka hor intaan wax kale, barta muhiimka ah ee kala duwanaanshaha Google iyo Amazon waa in mashiinka raadinta waaweyn uu badanaa loogu talagalay in lagu iibiyo xayeysiisyada - ku siinaya jawaabo deg deg ah iyo samaynta macquul inaad ku soo noqotid raadinta soo noqnoqoneysa si aad u sameyso baaritaano badan, ugu dambeyntii - sii xayeysiisyo xayeysiis ah. Natiijo ahaan, maadooyinka guushu Google waxay ku soo noqdaan inta badan waqtiga celceliska isticmaalaha, iyo sidoo kale qiimaha riixitaanka. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, Amazon waxay diiradda saareysaa sidii loo bixin lahaa dakhli dheeraad ah ama celcelis guud oo lagu cabiray codsi kasta ee dukaamaysiga ah ee sheyga gaar ah ee iibinta halkaas. Waxay u dhigantaa in Amazon ay u badan tahay in ay dib u habeyn doonto natiijooyinkeeda raadinta sidaa daraadeed macaamiisha badan ee suurta galka ah ayaa si guul ah loogu beddelaa iibsadaha dhabta ah. Taasi waa sababta haddii aad rabto in aad ogaato sida loo iibsado more on Amazon - waa inaad diirada saarto hagaajintaada, marka hore iyo ugu horreyn. Si fudud sababtoo ah aragtida qiimeynta A9 ee raadinta algorithm, helitaanka isugeyntii dheeraadka ah macnaheedu waa in lacag dheeraad ah loo siiyo meheradda ganacsiga ee Amazon.
Calaamadaha Amazon ee Performance and Relevance
Inta badan, saameynta ugu muhiimsan ee Amazon waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo kala duwan - ku habboon. Oo halkan waxaan ugu dambeyntii ku soo galeynaa dhibic - waa in aad sameysaa farqi cad oo u dhaxeeya labadan arrimood si aad u fahamto sida aad uga taxadari karto Amazon. Halkan ayay yihiin.
Calaamadaha waxqabadka - wax kasta oo ku saabsan calaamadaha ugu muhiimsan ee waxqabadka (qiimaha isbeddelka laftiisa, iyo weliba qiimaha badeecada iyo sawirada) dhab ahaantii ma aheyn mid aad u adag. Si fudud u dhig, mid kasta oo ka mid ah arrimahan ayaa siin doona calaamad xoog leh Amazon in badeecadaada ay u badan tahay in ay si fiican u iibiso, markaad si wacan u sarreyso.
Calaamadaha udhexeeya - kooxdani waxay u taagan tahay mowduucyada ugu muhiimsan ee liisaska boggaaga ee A9 si loo go'aamiyo in alaabtaada ay dhab ahaantii khuseyso raadinta user. Waa kuwan astaamaha ugu muhiimsan ee liiskaaga kuwaas oo loo aqoonsaday inay yihiin qodobbada asaasiga ah ee muhiimka ah: Title Product, Brand, List of Points Messages, Sharaxaada Waxyaabaha, Raadinta Shuruudaha, Soo-iibiyaha, Habka, Habka Maalmeedka, Falanqaynta Muuqaalada, Macaamiisha, sida sidoo kale sida ku xiga Guud ee Sales.